Izizathu eziyi-10 ezikhombisa ukuthi ukuguquka kwesimo sezulu kungokoqobo | Isimo Sezulu Senethiwekhi
Izizathu eziyi-10 ezikhombisa ukuthi ukuguquguquka kwesimo sezulu kungokoqobo
Kusebaningi, abantu abaningi emhlabeni abangakholelwa ekuguqukeni kwesimo sezulu (njengoMongameli waseMelika, uDonald Trump). Noma kunjalo, Ukuguquguquka kwesimo sezulu kungokoqobo futhi sekuya ngokuya kubalulekile ukukuyeka, ngoba imiphumela yako ibhubhisa kakhulu abantu nezinhlobonhlobo zezinto eziphilayo.
Ngabe uyafuna ukwazi ubufakazi obucacile bokuthi ukuguquguquka kwesimo sezulu kukhona?
1 Ukuguquka kwesimo sezulu emhlabeni
2 Izizathu eziyi-10 zokuthi kungani ukuguquguquka kwesimo sezulu kungokoqobo
Ukuguquka kwesimo sezulu emhlabeni
Kwiplanethi yethu konke kuhlobene futhi yonke into ixhumana nezinye izakhi. Izidalwa eziphilayo zidinga izimo ezithile zempilo ukuze ziphile kahle. Ukuguquka kwesimo sezulu kubanga izinhlobo eziningi zezilwane, izitshalo, amabhaktheriya, njll. Baphelelwa yindawo yabo yokuhlala lapho bengathuthuka khona futhi baphile kahle. Isibonelo, ekuqaleni kuka-Okthoba, ama-walrus angama-35.000 afika ogwini lwase-Alaska ngenxa yokuntuleka kweqhwa e-Arctic. Badinga iqhwa ukuze bakwazi ukuphumula nokuphumula futhi futhi kuyindawo yabo yemvelo.
Lo mcimbi akuqali ukwenzeka, kepha kunikeze okuningi okuzokhulunywa ngakho. Kushicilelwe udaba lwezindaba oluphawula ngalesi siqephu sama-walrus esichaza ukuthi ukuguquguquka kwesimo sezulu kuyinto yangempela nokuthi kusithinta sonke. Unyaka ngaphambi kwalokhu okwenzekile, futhi Cishe ama-walrus ayizi-10.000 XNUMX aqoshwa e-Alaska Beach ngesizathu esifanayo: Lincane futhi liyancipha iqhwa olwandle lwase-Arctic, ngakho abanandawo yokuphumula futhi bahlala ngokuthula.
Okukhathazayo ngesimo sokuguquka kwesimo sezulu ukuthi imiphumela yaso ivezwa ngendlela ebesingalindelekile lapho singakulungele ukulwa nayo noma ukuyinciphisa. Lokhu kusho ukuthi, kwabanye, le nto ayiyona ngokoqobo njengezinye nokuthi izinsongo zayo azibonakali.
Izizathu eziyi-10 zokuthi kungani ukuguquguquka kwesimo sezulu kungokoqobo
Ukugwema ukudida abantu ngokuthi ukuguquguquka kwesimo sezulu kungokoqobo noma cha, ngizokunikeza izizathu eziyi-10 ezibonisa ukuthi ikhona, nokuthi imiphumela yayo iya iba mikhulu futhi iyabhubhisa.
Phakathi kuka-1982 no-2010, kwashicilelwa izincwadi ezingama-108 zezifundo eziphika ubukhona bokuguquka kwesimo sezulu. Amaphesenti angama-90 kuphela aleyo nombolo abuyekezwe ngontanga.
Vele U-0,01% wabo bonke ososayensi emhlabeni abakholelwa ekuguqukeni kwesimo sezulu.
Ngo-1985 uSvante Arrhenius, isazi sefilosofi nesazi samakhemikhali saseSweden, wethula okokuqala ngqa iphepha elichaza ngemithelela yokwanda kwesikhutha emhlabeni kanye nomphumela wokubamba ukushisa.
Ngokusho komphakathi wesayensi kanye nochwepheshe abavela kwi-Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), uma izinga lokushisa kweplanethi likhuphuka ngama-degree amabili ngaphezu kwesilinganiso salo, lizoba nemiphumela emibi kakhulu futhi engalungiseki kubantu.
Amadoda singakhipha amathani ayi-800.000.000.000 amamethrikhi e-carbon dioxide emkhathini ngaphambi kokufinyelela kulokho kukhuphuka okungu-2 ° C ekushiseni kweplanethi.
Yize kubonakala sengathi ukuguquguquka kwesimo sezulu akulona iqiniso kwabaningi, kulinganiselwa ukuthi cishe abantu abangama-400.000 bafa unyaka ngamunye ngenxa yezimbangela ezihlobene nakho. Kungenzeka ukuthi sekuvele ngenxa yezikhukhula ezandayo, iziphepho kanye nesomiso.
Sekuyiminyaka ephakathi kuka-800.000 no-15.000.000 iminyaka selokhu amazinga e-carbon dioxide esemkhathini abephezulu njengoba enjalo manje.
Kusukela ekuguqulweni kwezimboni, isikhutha esikhungweni sezulu senyukile ngamaphesenti ayi-142.
Ukunyuka okungu-25% kwe-CO2 kwenzeka kuphela phakathi kuka-1959 no-2013.
Ngo-2010, ukulahleka kwe-GDP emhlabeni jikelele okubangelwe wukuguquka kwesimo sezulu kwafinyelela ku- $ 696.000.000.000 million.
Njengoba ukwazi ukubona, kunezizathu ezinokwethenjelwa zokusho ukuthi ukuguquguquka kwesimo sezulu kukhona futhi kungokoqobo. Isikhathi ngasinye imiphumela yaso iyanda kakhulu futhi nemiphumela iba mibi. Ukuguquka kwesimo sezulu kuthinta ngendlela engalingani wonke amazwe omhlaba, Kepha abasengozini kakhulu yilabo abahlupheka kakhulu nalabo abanokuncane kakhulu abangakwazi ukukunciphisa futhi balwe nakho. Yingakho ohulumeni emhlabeni wonke bezama ukulwa nokuguquka kwesimo sezulu ngendlela elinganayo.
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Isimo sezulu » Ukuguquka kwesimo sezulu » Izizathu eziyi-10 ezikhombisa ukuthi ukuguquguquka kwesimo sezulu kungokoqobo
ICalifornia Redwoods ivundiswa ngothuli oluvela oGwadule lwaseGobi
Ukwanda kwamafu e-Arctic kwenza isimo sokushisa sibe sibi kakhulu